Sarakiisha gudiga EACC oo ay maxkamada u diiday in ay jeediyan hadala ka dhan ah Philip Kinisu – The Voice of Northeastern Kenya
Sarakiisha gudiga EACC oo ay maxkamada u diiday in ay jeediyan hadala ka dhan ah Philip Kinisu
Maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay go’aan sarakiisha gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ka hor istaagayo in ay jeediyaan hadala ka dhan ah gudomiyaha gudiga Phillip Kinisu.
Hadaladan ay maxkamadda diiday in ay jediyaan ayaa ah kuwo la xiriira baaritaanada sarkalkan lagu sameynayo.
Garsoore Edward Muriithi ayaa soo saaray amar ku meel gaar ah oo ku aadan madaxa fulinta ee gudiga EACC Halakhe Waqo, kuxigeenkiisa Michael Mubea iyo sarakiisha kala ah Sophia Lepuchirit, Dabar Maalim, Paul Gachoka iyo Rose Macharia.
Maalintii shalay ayey ahayd markii sarakiishan ay dalbadeen in Philip Kinisu uu xilkiisa iska casilo si loogu sameeyo baaritaanada ku aadan sida shirkad lala xiriirinayo ay qandaraas ay siisay waaxda adeega qaran ee dhalinyarada ee NYS ugu guleysatay.
Mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuququl aadanaha oo lagu magacaabo Okiya Omtatah aya maxkamada u gudbiyay dacwad ka dhan ah saraakiisha gudiga EACC, agaasimaha waaxda dambi baarista Ndegwa Muhoro iyo koox lagu magacaabo Bunge la Wananchi .
← Madaxda countiga kajiado oo ardayda ugu baaqay in aynan hantida dugsiyada burburinin
Taliyaha ciidamada wadooyinka ee Kericho oo musuq-maasuq loo xiray →